कसरी सम्भव छ ? १ महिलाले २ बाबुको २ सन्तान एकैपटक जन्माईन
आईतबार, मंसिर १४, २०७७ Sarangi Radio Network
सुन्दरबजार सहित यी हुन् गण्डकीका उत्कृष्ट ११ स्थानीय तह
सात वर्षमा १४ हजार महिला बलात्कारको शिकार,साढे ६ हजार बालिका
चर्चित क्रीकेटर सन्दीप लामिछाने कोरोना संक्रमित, ज्ञानेन्द्र मल्लले जिते
प्रचण्डसँग ओलीको यस्तो प्रस्ताव: नेकपामा मच्चियो खैलाबैला
ब्रेकिङ: भर्खरै गुल्मीमा जीप दुर्घटना,५ जनाको मृत्यु,२ गम्भीर घाइते
बिहिबार, फागुन १६, २०७५ एजेन्सी
पाेखरा । एलेक्जेन्ड्रा र कोल्डर १९ महिनाका जुम्ल्याहा हुन्। तर उनीहरूका बुवा भने एउटै व्यक्ति होइनन्। एलेक्जेन्ड्राका पिता साइमन हुन् भने उनीसँगै जन्मिएका उनका जुम्ल्याहा भाइकोल्डरका पिता ग्रेएम हुन्।
तर एउटै गर्भबाट एकैचोटि जन्मिएका सन्तानका भिन्नभिन्न पिता हुनु कसरी सम्भव छ ? चार बुवा, तीन देश र दुई सन्तान पिता बन्ने इच्छा भएका साइमन र ग्रेएम बर्नी-एड्वार्ड्जसमक्ष ठूलो चुनौती थियो।
उनीहरू शरीरबाहिर कृत्रिम परिस्थितिमा ‘इन भिट्रो फर्जिलाइजेशन’बाट एउटा मात्र भ्रूण गर्भाधान गराउन खोज्ने केही ब्रिटिश जोडीमध्येका हुन्। त्यसरी तयार पारिएको भ्रूण सरोगेट आमा बन्न सहमत भएकी एउटी महिलाको कोखमा प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने हुन्थ्यो।
त्यो प्रक्रिया लामो र जटिल थियो। सबैभन्दा पहिला त आफ्नो शुक्राणुबाट गर्भाधान गराउन उनीहरूलाई छुट्टाछुट्टै डिम्ब चाहिएको थियो।
पहिला उनीहरू छुट्टै गर्भबाट दुई बच्चा होऊन् भन्ने चाहन्थे। तर उनीहरूलाई डिम्ब दान दिने महिला खोज्न सघाउने संस्थाले एकैचोटि एउटी सरोगेट आमाको गर्भमा दुईवटा बच्चा हुर्काउन मिल्ने जानकारी दियो। यूकेमा बस्ने भएपनि साइमन र ग्रेएम त्यसका लागि विदेश गए।
साइमन भन्छन्, “हामीसँग नाम नखुलाइएकी अमेरिकी महिला डिम्बदाताका रूपमा थिइन् किनभने प्रजननसम्बन्धी हाम्रो उपचार लास भेगसमा भएको थियो।”
डिम्बहरू सङ्कलन गरेपछि तिनलाई दुई भागमा विभाजित गरियो अनि एउटा भाग साइमनको शुक्राणु र अर्को भाग ग्रेएमको शुक्राणुबाट निषेचन गरियो।
त्यसपछि विकसित भएका भ्रूणलाई छानेर कम तापक्रममा भण्डारण गरियो। दुई समूहबाट छानेर सबैभन्दा पुष्ट भ्रूणलाई सरोगेट आमाको कोखमा राखियो। तिनै महिलाले आफ्नो कोखमा ती दुई बच्चालाई क्यानडामा हुर्काइन्।
बिहिबार, फागुन १६, २०७५, १८:०२:००
राेचक को अधिक समाचार पढ्नुहोस्
माता दुर्गालाई आफ्नो रगत चढाएर तीन बर्षसम्म राजाले के के मागे ?
तपाईंको राशी र जन्मकुण्डली अनुसार यस्ता पर्स बोक्नुहाेस्, कहिल्यै पैसाको कमि हुदैन
महिला यो हद सम्म जान सक्छन्, आखिर किन ? यस्तो छ कारण
धड्कन शर्माको कविता : आस्था
सोमबार, असार २२, २०७७ एजेन्सी
यी हुन् विश्वका चर्चित १३ यौन काण्ड, जस्ले हल्लायाे विश्व
सोमबार, जेठ १२, २०७७ एजेन्सी
अदालतमै कृत्रिम योनी देखि जहाजको ककपिटमा सम्म पुरा पढ्नुहोस्
सुन्दरबजार सहित यी हुन् गण्डकीका उत्कृष्ट ११ स्थानीय तह शनिबार, मंसिर १३, २०७७
सुन्दरबजार सहित यी हुन् गण्डकीका उत्कृष्ट ११ स्थानीय तह सारङ्गी न्युज
ब्रेकिङ: भर्खरै गुल्मीमा जीप दुर्घटना,५ जनाको मृत्यु,२ गम्भीर घाइते सारङ्गी न्युज
सात वर्षमा १४ हजार महिला बलात्कारको शिकार,साढे ६ हजार बालिका शनिबार, मंसिर १३, २०७७
प्रचण्डसँग ओलीको यस्तो प्रस्ताव: नेकपामा मच्चियो खैलाबैला शनिबार, मंसिर १३, २०७७
प्रतिक्रान्तिको खतरा र अबको बाटो -अजित क्षेत्री बिहिबार, मंसिर ११, २०७७